एमालेका जनप्रतिनिधि : कोही कानको जाली फुटाउने, कोही युवती कुटाउने !
केही दिनअघि गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका–५ ग्वाघामा नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष टेकबहादुर पुनले स्थानीन मानबहादुर बिकलाई रामधुलाई गरे । मानबहादुर दलितमात्रै होइनन्, अपांग पनि छन् । अध्यक्ष टेकबहादुर भने एमालेका तर्फबाट चुनिएको जनप्रतिधि हुन् । मुखबाट उछिट्टिएको एक बोलीका कारण मानबहादुरले टेकबहादुरको झाप्पु खानु प¥यो । ‘चुनावअघि पाँच हजार पैसा र जस्तापाता दिन्छु भनेका पुनले अब त जिते क्यारे, देलान् नि । नत्र जनताले कालोमोसो दल्छन्…विस्तृत समाचार »
थवाङको 'प्याराडाइम सिफ्ट' : बुलेट हैन व्यालेट बक्सलाई निम्ता
न्यूजसेवा टिप्पणी चिनिया क्रान्तिको निसानी बनेको यौटा पहाड थियो चिङ काङ सान । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा रहेको लाल सेनाको आधार क्षेत्र । जापानी साम्राज्यवाद र च्याङ काई सेक सरकारको तारो बनेको पहाड । र, यही पहाडी इलाकालाई आधार क्षेत्र मान्दै अघि बढेको लाल सेना विजयी बन्दै सिंगो चीन मुक्त गर्दाको क्षण । नेपालका कम्युनिस्टहरुका लागि चिङ काङ सान पहाड आदर्श पहाड…विस्तृत समाचार »
​राजपाको आन्दोलन : बहिस्कार गरेर बैद्य माओवादी बन्ने या तराईको पहिलो शक्ति ?
विष्णु पोखरेल राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले आइतबार निर्बाचनमा भाग नलिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो । राजपाको आन्दोलनका कार्यक्रम यस्ता छन् कि आफुले बहिस्कार मात्र होइन, जनताले भोट हाल्न पनि नपाउन् भन्ने उद्देश्यले गरिएको आमहड्तालसहित । सरकारले पटक पटक लचिलो ढंगले प्रस्तुत भएर निर्वाचनको मिति सार्दा पनि राजपा सहमत हुन सकेन । फलस्वरूप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर निर्वाचन बिथोल्ने कदमतर्फ…विस्तृत समाचार »
सुदुरपश्चिमले कर्तव्यको भारी मात्रै कहिलेसम्म बोकिरहने ? सुदुरका समस्या,सम्भावना र सपनाहरु
द्रोण अवस्थी नेपालको संविधान असोज ३ गते भव्यताका साथ जारी गरी यो त्यही दिन हामीहरुको पनि सपना खाका कोरीयो संविधानमा सुदूरपश्चिमकै नै ओटौ जिल्लालाइ एक मान्दै प्रदेश नं ७ नामाकरण गरियो । हो त्यही सपनाको खाका कोर्ने क्रममा सुदूरपश्चिममा अनिश्चित कालिन बन्द, हरताल के के हो के के माग केहो थाहा छैन बन्द केको हो थाहाँ छैन…विस्तृत समाचार »
१ बैशाख २०७४
लियो गंगा दाहाल राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग गर्ने महिला अत्यन्तै न्यून छन्। राज्यसत्ता र राज्यसत्ताका नाइकेहरुले प्रयोग गरेका महिलाको संख्या धेरै छ । महिला कसैको खेत होइनन्, जसले…विस्तृत समाचार »
​यसकारण पतन हुनेछ एमाले
सुरुमै प्रस्ट्र भनौं, यो कसैलाइ लक्षित गरि लेखिएको लेख होइन । बस् ,जिम्मेवार दलको चरित्रलाइ केलाउँदै मतदातालाइ सचेत पार्ने एक चेष्टा मात्र हो । दुई दशकपछि स्थानीय चुनाब हुन गइरहँदा यो देशमा लाखौं नयाँ निर्णायक मतदाता जन्मिएका छन् । कयौं लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुनैलाग्दा भइरहेको निर्वाचनले देशलाइ गतिशिल मात्र बनाउने छैन, दुरदराजका नेपालीले संघियताको आयाम र महत्वबारे बुझ्नेछन् । दैनिक जनजीबनमा आइपर्ने हरेक सरकारी कामहरु…विस्तृत समाचार »
आईजीपी प्रकरणः प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?
सूूर्य खड्का पञ्चायतविरुद्ध ०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि नेपालको न्यायालयले नेपाली राजनीतिलाई संक्रमणतिर धकेल्न के कति योगदान वा व्यवधान गर्‍यो ? यो बहसको विषय हुन सक्छ । तर, केही त्यस्ता अदालती फैसलाहरु पनि छन्, जसले नेपालको राजनीतिलाई संक्रमणतिर धकेलेको छ नै । ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा आफ्नो धन्यवाद प्रस्ताव विफल भएपछि दम्भपूर्वक संसद भंग गरेर राजनीतिक अस्थिरताको जग हाले । त्यतिबेला कोइरालाको संसद्…विस्तृत समाचार »
ओली र नेपालले यसरी गराएका थिए राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि : एमालेकै नेताको बयान
२०५२ साल माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारत सरकारबीच विवादास्पद महाकाली सन्धि भयो । शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विदेशीय यो सम्झौताले नेपालको भूराजनीतिमा तरंग पैदा गरिदियो । १२ धारामा समेटिएको यो सन्धि बराबरीको सिद्धान्तअनुसार गरिएको भनिएको थियो । बिजुली उत्पादन गर्ने र उत्पादित बिजुली भारत तथा नेपालले बराबरी बाँड्ने कुरामा दुवै पक्षबीच…विस्तृत समाचार »